मनोरन्जन – Page6– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ आश्विन २०७७, सोमबार ०२:१४ English
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बन्न राजेश र भुवनको दौडधूप ६ माघ २०७६, सोमबार १७:३५
आस्थाले भनिन्, ‘म माफी माग्न तयार छु, प्लिज फरार नभन्दिनोस्’ ५ माघ २०७६, आईतवार १५:४६
काठमाडौँ, ५ माघ । गायिका आस्था राउतलाई महिला प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको उजुरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ गर्न अनुमति दिएपछि प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमा राखेको छ । सिक्किम पुगेकी आस्थाले पक्राउ पुर्जी जारी भएको र आफूलाई फरार भनेर किटानी गरिएपछि आफू फरार नरहेको..
आस्था राउतलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले पायो अनुमति ५ माघ २०७६, आईतवार १४:०३
काठमाडौँ, ५ माघ । गायिका आस्था राउतलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा राउतविरुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा प्रशासनले पक्राउ अनुमति दिएको हो..
गायिका आस्था राउतविरुद्द मुद्दा दर्ता ५ माघ २०७६, आईतवार ११:५२
काठमाडौँ, ५ माघ । गायिका आस्था राउतविरुद्ध प्रहरीलाइृ अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ । बुधबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा चेकजाँचका क्रममा राउतले महिला प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ..
गायिका आस्था विरुद्द प्रहरी जवान श्रेष्ठले दिइन् उजुरी ३ माघ २०७६, शुक्रबार १७:१९
काठमाडौँ, ३ माघ । गायिका आस्था राउत विरुद्ध प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठले उजुरी दिएकी छिन् । गायिका राउतलाई विमानस्थलमा जाँच गर्ने प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठले आफूमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी छिन् । विमानस्थल प्रहरी कार्यालय..
आस्था राउतमाथि प्रहरीले थाल्यो छानबिन २ माघ २०७६, बिहीबार १५:५८
काठमाडौँ, २ माघ । गायिका आस्था राउतले फेसबुकमा प्रहरीलाई गाली गदरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्रीले..
‘छक्का पन्जा ४’को घोषणा ११ पुष २०७६, शुक्रबार १३:३६
काठमाडौँ, ११ पौष । ‘छक्का पन्जा ३’ पछि ‘छ माया छपक्कै’ चलचित्र बनाएको दीपकराज गिरी नेतृत्वको टिमले ‘छक्का पन्जा ४’ बनाउने भएको छ । आगामी सालको दशैंको फूलपातिका दिन रिलिज गर्नेगरि चलचित्र ‘छक्का पन्जा ४’को घोषणा भएको हो । दीपकले चलचित्रका लागि कथा लेख्ने काम सुरु भईसकेको जनाएका छन्..
बलिउड गायीका भोस्ले काठमाडौँमा ९ पुष २०७६, बुधबार १७:४८
काठमाडौँ, ९ पौष । बलिउड गायीका आशा भोस्ले काठमाडौं आइपुगेकी छन् । साधना कला केन्द्रले राजधानीको सोल्टी होटलमा शनिबार आयोजना गर्न लागेको रञ्जीत गजमेरको एक संगीत रहेका गीतहरुको कार्यक्रममा गाउन उनी काठमाडौँ आईपुगेकी हुन् । उनलाई बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा..
गायक ढकाल र निलमबीच सम्बन्ध बिच्छेद ९ पुष २०७६, बुधबार १७:२७
काठमाडौँ, ९ पौष । गायक रामकृष्ण ढकाल र उनकी श्रीमती निलम शाहबीच सम्बन्ध बिच्छेद भएको छ । बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट उनीहरुले मिलापत्रकै आधारमा सम्बन्ध विच्छेद गरेका हुन् । मंगलबार जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदको निवेदन दिएका उनीहरुको बुधबारै सम्बन्ध बिच्छेद भएको हो ।..
थाइल्याण्ड फेसन फेष्टिबलका लागि छानिए साढे ३ वर्षे बालक ३ पुष २०७६, बिहीबार १२:५३
काठमाडौँ, ३ पौष । थाइल्याण्डमा हुने इन्टरनेशनल फेसन फेष्टिबलका लागि साढे ३ वर्षीया बालक छानिएका छन् । पहिलो चरणको अडिसनबाट १२ जना छनोट भएकामध्ये साढे ३ वर्षीय बालक कृभिशेष खड्कासमेत छन् । ड्रिम सर्च एजेन्सीले अप्रिल २५ तारिखमा आयोजना गर्ने थाइल्याण्ड इन्टरनेशनल फेसन फेष्टिबलका..
चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईको निधन ३० मंसिर २०७६, सोमबार ०९:३५
काठमाडौँ, ३० मंसिर । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईको निधन भएको छ । वैवाहिक कार्यक्रमबाट निवास फर्कंदै गर्दा बाटोमा बेहोस भएका उनलाई उपचारका लागि चावहिलको ओम अस्पताल लगिएको थियो । उनको हृदयाघातका कारण गए राति नै निधन भएको हो । भट्टराई चलचित्रका निर्देशकसँगै जनपक्षीय..
निर्देशक समाजको नेतृत्वमा पुनः महिला, राणा बिनन् अध्यक्ष २९ मंसिर २०७६, आईतवार १०:२०
काठमाडौँ, २९ मंसिर । चलचित्र निर्देशक समाजको अध्यक्षमा रक्षा सिंह राणा चुनिएकी छिन् । समाजमा लगातार दोश्रो पटक महिला अध्यक्ष चुनिएको हो । शनिबार भएको निर्वाचनले राणालाई नयाँ अध्यक्ष चुनेको हो । उनका निकटतम प्रतिदन्वदी सुचित्रा श्रेष्ठ १ मतले पराजित भईन् । राणाले ४५ मत प्राप्त..
‘भ्वाइस अफ नेपाल’को उपाधी राम लिम्बुलाई २२ मंसिर २०७६, आईतवार १२:२०
काठमाडौँ, २२ मंसिर । दोस्रो संस्करणको ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ रियालिटी शोको उपाधि राम लिम्बुले जितेका छन् । शनिबार राति काठमाडौँमा भएको अन्तिम प्रतिष्पर्धाबाट लिम्बु विजयी घोषित भएका हुन् । प्रमोद खरेलको समूहमा रहेका लिम्बुले अन्य तीन प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै धेरै भोट ल्याएर उपाधी..
दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा रमेश बिजी निर्वाचित ९ मंसिर २०७६, सोमबार ११:४२
काठमाडौँ, ९ मंसिर । राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्षमा रमेश बिजी निर्वाचित भएका छन । मङ्सिर ६ देखि ८ गतेसम्म पोखरामा भएको प्रतिष्ठानको सातौँ महाधिवेशनमा उनले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी विष्णु खत्रीलाई ३९ मतले पछि पार्दै निर्वाचित भएका हुन् । कोषाध्यक्षमा..
लोक तथा दोहरी गीत प्रतिष्ठानमा १० पदाधिकारी निर्विरोध ८ मंसिर २०७६, आईतवार १२:२१
पोखरा, ८ मंसिर । पोखरामा ‘राष्ट्रिय लोक तथा दोहरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल’को सातौ महाधिवेशन जारी छ । प्रतिष्ठानको महाधिवेशनले १० पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित गरिसकेको छ । प्रतिष्ठानको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा रिता थापा, प्रथम उपाध्यक्षमा पशुपति शर्मा, द्धितिय उपाध्यक्षमा रामजी खाँड र..
गोविन्दालाई के को हैसियतमा विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा किन राखियो ? २१ कार्तिक २०७६, बिहीबार १४:२२
काठमाडौँ, २१ कार्तिक । बलिउड अभिनेता गोविन्दा आहुजालाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा राखिएकोप्रति एक जना पूर्वमन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन् । भूतपूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री एवम् राप्रपा संयुक्तका नेता सुनिलबहादुर थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत..